मधुपर्क जेठ, २०६९ अतिरिक्त समय - रत्न प्रजापति पि्रन्सिपल चन्द्रप्रकाश जोशी निकै तनावमा थिए । तनावको मुख्य कारण थियो कलेजमा अतिरिक्त समय पढ्ने वातावरण मिलाउँदा पनि रिजल्ट नराम्रो आउनु । यस पटकको परीक्षामा अरूको तुलनामा उसको कलेजको रिजल्ट निकै 'पोर' भएको कुरा उसले अरू कलेजका पि्रन्सिपलसँग गरेपछि थाहा पाएको थियो । विशेषगरी फाइनल सेमेस्टरका विद्यार्थीको इन्टर्नशीपको रिजल्ट झनै खत्तम थियो । अघिल्ला ब्याचका विद्यार्थीहरूको इन्टर्नसिपमा कसैकसैको मात्रै सी ग्रेड आउँथ्यो र धेरैको ए ग्रेड आउँथ्यो भने यसपालि कसैकसैको ए ग्रेड र धेरैको सी ग्रेड आएको थियो । यसकारणले पनि पि्रन्सिपल जोशी तनावमा थिए । साथै कतिपय विद्यार्थीहरू पनि तनावमा थिए । इन्टर्नसिपको ग्रेडकै कारणले आˆनो क्यारियरमै धक्का लाग्ने भएकाले विद्यार्थीहरू चिन्तित थिए ।
तनाव शान्त होला कि भनेर पि्रन्सिपल जोशीले कलेजको एक चक्कर लगाए तर उनको तनाव घट्नुको साटो झन् बढ्यो । धेरैजसो विद्यार्थीहरू पढ्नमा भन्दा खेल्नमा र मनोरञ्जनमा डुबेको देखेर उनको तनाव झन बढ्यो । उनले देख्यो केटाहरू बास्केटबल खेल्नमा मस्त थिए । कत्ति केटा र केटीका जोडीहरू पर कुनातिर बसेर प्रेमलीलामा व्यस्त थिए । कोही क्यान्टिनमा चुरोटको धुवाँ उडाउँदै हिपप म्युजिकको धुनमा मस्त थिए । कोही मोबाइलमा एसएमएस पठाउन र च्याट गर्न व्यस्त थिए । यी सबै अस्तव्यस्त दृश्य देखेर पि्रन्सिपल जोशीले मनमनै सोचे, 'पढ्ने विद्यार्थीहरू यस्ता भएपछि कसरी राम्रो रिजल्ट आउँछ ।'
कलेजको एक चक्कर घुमेर पि्रन्सिपल जोशी पूर्ववत् आˆनै कक्षमा गएर थचक्क कुर्सीमा बसे । उनको गर्‍हुँगो बोझ थाम्न गार्‍हो भएर त्यो कुर्सी एक पटक चुइँय गरेर करायो । कुर्सीको आवाज सुनेर पि्रन्सिपल जोशी आफैँं पनि एक पटक झसङ्ग भए र समालिएर बसे ।
पियन कृष्णले पानी ल्याएर टेबुलमा राखिदियो । उनले त्यो पानी घटघट पिए र लामो सास फेरे । यसो गर्दा उनलाई अलिकति हलुका भएको महसुस भयो । उनी सोच्न थाले, अब अभिभावकहरूको चित्त कसरी बुझाउने ? यति महँगो र नाउँ चलेको कलेज भइकन पनि यस्तो नराम्रो रिजल्ट आएकोमा कसलाई दोष दिएर पन्छिने, ˆयाकल्टीलाई ? विद्यार्थीलाई ? कि कलेज व्यवस्थापनलाई ? दिनहुँजसो अभिभावकहरूका फोन आइरहेका छन् । अब त झनै बढी आउँछन् । प्रायः सबैजसो अभिभावकको एउटै जिज्ञासा अथवा एउटै चिन्ता हुन्छ कि उनीहरूका केटाकेटीको पढाइ कस्तो भइरहेको छ ? नियमित कलेज आइरहेका छन् कि छैनन् ? घर